जान्नुहोस् ! यस्ता छ नरिवल र यसको महत्व
मे 19, 2019 मे 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, नरिवल
नरिवल स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण औषधि मानिएको छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले नरिवलका विभिन्न फाइदाहरु छन् । आज हामी तपाईलाई ती फाइदाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । हामीले खाने हरेक बस्तु स्वास्थ्यलाईं राम्रो फाइदा हुन सक्छ तर यस्ता बस्तुको प्रयोग के कस्ता रोगमा फाइदा हुन सक्छ भन्ने जानकारी सबैलाई हुन आवश्यक छ ।
नरिवल धार्मिक पूजा, विवाह, व्रतबन्ध शुभकार्य, यज्ञ, शुभ साईत आदिमा पनि प्रयोग हुदै आएको छ । यसलाई धार्मिक पूजामा पवित्र फलको रुपमा चढाइन्छ । शुभ विवाहमा मांगलिक फलको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । विभिन्न देवपूजामा फल चढाउने बाहेक व्रतबन्ध हुँदा जोगीको रुप लिएर भिक्षाटन गर्दा नरिवल दिने चलन प्रमप्रा देखि चल्दै आएको छ ।
स्वास्थ्यका लागी नरिवल भन्दा नरिवल भित्रको पानी बढी महत्वपुर्ण मानिएको छ । गर्मी याममा नरिवलको पानी पिउनाले गर्मी फाल्ने काम गर्दछ । पिसाब पोल्ने समस्या देखिएको खण्डमा पनि नरिवलको पानी सेवन गर्नाले राम्रो फाइदा गर्दछ । नरिवलको पानीको अर्को फाइदा रगत बढाउन पनि महत्वपूर्ण औषधि मानिएको छ ।
नरिवलको बाहिरको जटा पोलेर खरानी बनाउने र बनाएको खरानी सिसाको भाडोमा राख्ने यो औषधि १/२ चमत पाउडर १-१ ग्लास दहीमा फिटेर बिहान बेलुका खाने गरेमा केही दिनमा नै अल्काई रोग ठीक हुन्छ । तुलसीको पातको लेदो नरिवलको तेलमा फिटेर गुद्धद्वारको घाऊमा लगाउने गरेमा अल्काई रोग ठिक हुन्छ भनेको छ । नरिवलको तेल नियमित बालमा लगाउनाले बाल बढाउन र कालो बनाउन समेत महत्वपूर्ण छ ।
← घरेलु औषधिबाट कलेजोको रोगको उपचार
गायत्री मन्त्र किन जप्ने ? कुन समयमा जप गर्ने ? जानीराखौं →
अगस्ट 27, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
फ्रेवुअरी 5, 2019 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक 4
यस्ता छन् क्यान्सर हुने प्रमुख कारणहरु
डिसेम्बर 25, 2019 डिसेम्बर 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
One thought on “नरिवल र यसको महत्व”
Pingback: भगवानलाई किन चढाइन्छ नरिवल ? यस्त्तो छ कारण थाहा पाईराख्नुहोस्